အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်တစ်ခုထဲမှာပဲ အသင်း(၂)သင်းအထိပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကစားသမားများ |
ပြီးခဲ့တဲ့နေရွာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အလုပ်အရှုပ်ဆုံးကစားသမားကိုပြပါဆိုရင် အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်ကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြရမယ်။
ဒီနေ့မှာ ဘက်တစ်ကစားသမား၊ နောက်နေ့ကျတော့ ဘာစီလိုနာကိုရောက်၊ အခု သူက စပါးအသင်းကစားသမားသစ်ဖြစ်နေပြီ။
အမှန်တကယ်တော့ အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ် အခုလို မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရတာက ဘာစီလိုနာအသင်း မကောင်းတာတွေကြောင့်လည်းပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်ကို ဘက်တစ်အသင်းဆီအငှားချခဲ့ပြီး အခုနှစ်မှာ သူတို့ကစားသမားအတွက် ပေါင်(၅)သန်းပေးပြီးတော့ (၃)နှစ်စာချုပ်နဲ့အသင်းဆီ ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်။
အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းဆီ ပြန်ရောက်လို့ (၃)လလောက်အကြာ၊ လာလီဂါရာသီအစ(၃)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာပဲ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်ကို စပါးအသင်းဆီ ပေါင်(၂၅.၇)သန်းနဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ရတော့တာပဲ။
ဒါကြောင့် အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်ဟာ အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်တစ်ခုအတွင်း ကလပ်အသင်း(၂)သင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ရသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဒါက အီမာဆင်ရိုင်ယဲလ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့မတိုင်ခင်ကလည်း အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်တစ်ခုထဲမှာ ကလပ်(၂)သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပြီး သူတို့တွေကတော့ . . .
ဒီယက်တာဟာမန်း (လီဗာပူးလ်မှ ဘော်လ်တန်၊ ဘော်လ်တန်မှ မန်စီးတီး -၂၀၀၆)
နည်းပြကြီးဘင်နီတက်ဇ်လက်ထက် လီဗာပူးလ်အသင်းကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တုန်းက ဟာမန်းဟာ ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့အမာခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့အတူ (၇)နှစ်ကြာအောင် ကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူပေးခဲ့ပြီးနောက် (၁)နှစ်အကြာမှာပဲ မာဆေးလ်ဆိုက်ဒ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ နည်းပြကြီးအလာဒိုက်စ်ရှိရာ ဘော်လ်တန်အသင်းနဲ့ အကြိုသဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။
‘ဘော်လ်တန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့တာက ကျွန်တော့်ကစားသမားဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ပါ’လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ဟာမန်းတစ်ယောက် ဘော်လ်တန်အသင်းအတွက် ဘောလုံးတစ်ချက်မှ မထိရသေးခင်မှာပဲ စိတ်ပြောင်းသွားပြီး
ဇူလိုင်လမှာ ဘော်လ်တန်နဲ့တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ့်အစား မန်စီးတီးအသင်းဆီ ရုတ်တရက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအတွက် မန်စီးတီးအသင်းက ဘော်လ်တန်အသင်းကို နစ်နာကြေးအဖြစ် ပေါင်(၄၀၀,၀၀၀)ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဟာမန်းရဲ့ရွေးချယ်မှုက မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ ဘော်လ်တန်အသင်း အဆင့်(၇)နေရာရခဲ့ပေမယ့် မန်စီးတီးအသင်းကတော့ အဆင့်(၁၄)နဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီမစ်ချယ်လစ်(မာလာဂါမှ အက်သလက်တီကို၊ အက်သလက်တီကိုမှ မန်စီးတီး – ၂၀၁၄)
မာလာဂါအသင်းကို တန်းဆင်းရမယ့်ဘဝကနေ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနား,နာမည်ကျော်နောက်ခံလူဟောင်း ဒီမစ်ချယ်လစ်ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ အက်သလက်တီကိုအသင်းဆီ အလွတ်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမစ်ချယ်လစ်ရဲ့ အက်သလက်တီကိုကစားသမားဘဝက သိပ်အကြာကြီးမခံခဲ့ဘူး။
အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ (၂)လလောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် တရားဝင်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှမကစားရသေးခင်မှာပဲ မာလာဂါနည်းပြဟောင်း ပယ်လီဂရီနီက သူ့အသင်းသစ်မန်စီးတီးအသင်းဆီ ဒီမစ်ချယ်လစ်ကို ပေါင်(၄)သန်းကျော်နဲ့ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တယ်။
မန်စီးတီးအသင်းမှာ ဒီမစ်ချယ်လစ်ဟာ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ လိဂ်ဖလားတွေရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ကူကာရယ်လာ (ဘာစီလိုနာမှ အီဘာ၊ အီဘာမှ ဘာစီလိုနာ၊ ဘာစီလိုနာမှ ဂီတာဖေး-၂၀၁၉)
ဒီစာရင်းမှာ အထူးခြားဆုံးကတော့ ဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်း ကူကာရယ်လာပါပဲ။
သူက တခြားကစားသမားတွေလို ကလပ်အသင်း(၂)သင်းသာမဟုတ်ဘဲ အပြောင်းရွှေ့စျေးကွက်တစ်ခုထဲမှာ (၃)သင်းအထိပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တာပါ။
၂၀၁၉၊ နေရွာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ကူကာရယ်လာကို အီဘာအသင်းဆီ အငှားချခဲ့ပြီး စာချုပ်ထဲမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ကူကာရယ်လာကို အချိန်မရွေး ပေါင်(၃.၅)သန်းပေးပြီးတော့ ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ကူကာရယ်လာကို အငှားချပြီးလို့ (၁၆)ရက်အကြာမှာပဲ ပေါင်(၃.၅)သန်းနဲ့ပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီး အသင်းမှာ ဆက်ထားလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ကူကာရယ်လာကို ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဂီတာဖေးအသင်းဆီ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကုန်အထိ အငှားပြန်ချခဲ့ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ကြောင်တောင်တောင်ထပ်မလုပ်တော့ဘဲ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တဲ့အထိ အငှားချခဲ့သလို ရာသီကုန်မှာ ဂီတာဖေးက သူ့ကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ၿပီးခဲ့တဲ့ေန႐ြာသီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕မွာ အလုပ္အရႈပ္ဆုံးကစားသမားကိုျပပါဆိုရင္ အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ကိုပဲ လက္ညႇိဳးထိုးျပရမယ္။ ဒီေန႔မွာ ဘက္တစ္ကစားသမား၊ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ဘာစီလိုနာကိုေရာက္၊ အခု သူက စပါးအသင္းကစားသမားသစ္ျဖစ္ေနၿပီ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ အခုလို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့ရတာက ဘာစီလိုနာအသင္း မေကာင္းတာေတြေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တုန္းက ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ကို ဘက္တစ္အသင္းဆီအငွားခ်ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာ သူတို႔ကစားသမားအတြက္ ေပါင္(၅)သန္းေပးၿပီးေတာ့ (၃)ႏွစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔အသင္းဆီ ျပန္ေခၚခဲ့တယ္။
အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းဆီ ျပန္ေရာက္လို႔ (၃)လေလာက္အၾကာ၊ လာလီဂါရာသီအစ(၃)ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္မွာပဲ ဘာစီလိုနာအသင္းက ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ကို စပါးအသင္းဆီ ေပါင္(၂၅.၇)သန္းနဲ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ရေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္ဟာ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္း ကလပ္အသင္း(၂)သင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကစားခဲ့ရသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက အီမာဆင္႐ိုင္ယဲလ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔မတိုင္ခင္ကလည္း အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေစ်းကြက္တစ္ခုထဲမွာ ကလပ္(၂)သင္းကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြရွိခဲ့ၿပီး သူတို႔ေတြကေတာ့ . . .
ဒီယက္တာဟာမန္း (လီဗာပူးလ္မွ ေဘာ္လ္တန္၊ ေဘာ္လ္တန္မွ မန္စီးတီး -၂၀၀၆)
နည္းျပႀကီးဘင္နီတက္ဇ္လက္ထက္ လီဗာပူးလ္အသင္းႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူႏိုင္ခဲ့တုန္းက ဟာမန္းဟာ ႀကိဳးၾကာနီတို႔ရဲ႕အမာခံတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔အတူ (၇)ႏွစ္ၾကာေအာင္ ကစားသမားဘဝျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားရယူေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ (၁)ႏွစ္အၾကာမွာပဲ မာေဆးလ္ဆိုက္ဒ္အသင္းနဲ႔လမ္းခြဲၿပီးေတာ့ နည္းျပႀကီးအလာဒိုက္စ္ရွိရာ ေဘာ္လ္တန္အသင္းနဲ႔ အႀကိဳသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္။
‘ေဘာ္လ္တန္အသင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာက ကြၽန္ေတာ့္ကစားသမားဘဝအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ပါ’လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ဟာမန္းတစ္ေယာက္ ေဘာ္လ္တန္အသင္းအတြက္ ေဘာလုံးတစ္ခ်က္မွ မထိရေသးခင္မွာပဲ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီး ဇူလိုင္လမွာ ေဘာ္လ္တန္နဲ႔တရားဝင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ့္အစား မန္စီးတီးအသင္းဆီ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ မန္စီးတီးအသင္းက ေဘာ္လ္တန္အသင္းကို နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေပါင္(၄၀၀,၀၀၀)ေပးခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟာမန္းရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈက မွားယြင္းခဲ့တယ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမွာ ေဘာ္လ္တန္အသင္း အဆင့္(၇)ေနရာရခဲ့ေပမယ့္ မန္စီးတီးအသင္းကေတာ့ အဆင့္(၁၄)နဲ႔သာေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီမစ္ခ်ယ္လစ္(မာလာဂါမွ အက္သလက္တီကို၊ အက္သလက္တီကိုမွ မန္စီးတီး – ၂၀၁၄)
မာလာဂါအသင္းကို တန္းဆင္းရမယ့္ဘဝကေန ခ်န္ပီယံလိဂ္ဝင္ခြင့္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အာဂ်င္တီးနား,နာမည္ေက်ာ္ေနာက္ခံလူေဟာင္း ဒီမစ္ခ်ယ္လစ္ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အသင္းနဲ႔လမ္းခြဲၿပီးေတာ့ အက္သလက္တီကိုအသင္းဆီ အလြတ္နဲ႔ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမစ္ခ်ယ္လစ္ရဲ႕ အက္သလက္တီကိုကစားသမားဘဝက သိပ္အၾကာႀကီးမခံခဲ့ဘူး။ အက္သလက္တီကိုအသင္းမွာ (၂)လေလာက္သာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အသင္းအတြက္ တရားဝင္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲမွမကစားရေသးခင္မွာပဲ မာလာဂါနည္းျပေဟာင္း ပယ္လီဂရီနီက သူ႔အသင္းသစ္မန္စီးတီးအသင္းဆီ ဒီမစ္ခ်ယ္လစ္ကို ေပါင္(၄)သန္းေက်ာ္နဲ႔ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့တယ္။ မန္စီးတီးအသင္းမွာ ဒီမစ္ခ်ယ္လစ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တယ္လို႔သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္နဲ႔ လိဂ္ဖလားေတြရယူႏိုင္ခဲ့တယ္။
ကူကာရယ္လာ (ဘာစီလိုနာမွ အီဘာ၊ အီဘာမွ ဘာစီလိုနာ၊ ဘာစီလိုနာမွ ဂီတာေဖး-၂၀၁၉)
ဒီစာရင္းမွာ အထူးျခားဆုံးကေတာ့ ဘာစီလိုနာကစားသမားေဟာင္း ကူကာရယ္လာပါပဲ။ သူက တျခားကစားသမားေတြလို ကလပ္အသင္း(၂)သင္းသာမဟုတ္ဘဲ အေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစ်းကြက္တစ္ခုထဲမွာ (၃)သင္းအထိေျပာင္းေ႐ႊ႕ကစားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၉၊ ေန႐ြာသီမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ကူကာရယ္လာကို အီဘာအသင္းဆီ အငွားခ်ခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ကူကာရယ္လာကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေပါင္(၃.၅)သန္းေပးၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေခၚယူခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္လည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ကူကာရယ္လာကို အငွားခ်ၿပီးလို႔ (၁၆)ရက္အၾကာမွာပဲ ေပါင္(၃.၅)သန္းနဲ႔ျပန္ေခၚခဲ့ၿပီး အသင္းမွာ ဆက္ထားလားဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ကူကာရယ္လာကို ျပန္ေခၚၿပီးေတာ့ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဂီတာေဖးအသင္းဆီ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကုန္အထိ အငွားျပန္ခ်ခဲ့ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ထပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္တဲ့အထိ အငွားခ်ခဲ့သလို ရာသီကုန္မွာ ဂီတာေဖးက သူ႔ကို အၿပီးသတ္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။
(၂၈)နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ ပထမဆုံးရှုံးပွဲရင်ဆိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ပွဲပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ စပိန်
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ဒုက္ခရောက်အောင် စီရော်နယ်လ်ဒိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဂန္ထဝင်ကစားသမားနှစ်ဦးပြစ်တင်